Wednesday May 15, 2019 - 11:13:56 in Wararka by
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan Aqalka Sare ayaa ku kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kulankan ayaa ahaa mid is xogwareysi ay uga hadleen xaalada dalka, waxaana si gaar ah iskula soo qaadeen arrinta Maqaamka Muqdisho.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in Muuse Suudi uu ku amaanay Madaxweyne Xaaf doorkiisa ku aadan difaacida qadiyadda maqaamka Muqdisho iyo dadaalkii uu u galay.
Sidoo kale waxaa ay ku balameen in la adkeeyo arrinta maqaamka Muqdisho iyo dadaalada lagu raadinayo sidii Muqdisho u yeelan laheyd mataaladeeda siyaasadeed ee dalka.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo maalintii Sabtidii isaga soo tagay Garowe ayaa ku eedeeyay Madaxda dowladda Federaalka inay diidan yihiin maqaamka Muqdisho oo ay rabaan in muqdisho ahaato maamul la soo magacaabo, halkii dadkeeda ay soo dooran lahaayeen maamul ay raalli ka yihiin.
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray xiisad isaga iyo dowladda u dhaxeysay oo ku aadan dhulka Xero Mariino, waxaana Maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray amar looga guurayo dhulkaas oo ay degan yihiin Saraakiil ciidan hore, Xildhibaano iyo xubno horay xilal u soo qabtay.